KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Samuel Nhoma a Edi Kan 10:1-27
Ɔsraa Saul yɛɛ no ɔhene (1-16)
Ɔde Saul kyerɛɛ ɔman no (17-27)
10 Ɛnna Samuel faa ngo toa, na ohwiee ngo a ɛwom no guu Saul atifi.+ Ofew n’ano kae sɛ: “Ɛnyɛ Yehowa na wasra wo ayɛ wo ɔkannifo+ wɔ n’agyapade so?+ 2 Ɛnnɛ sɛ wufi me nkyɛn rekɔ a, wubehu mmarima baanu wɔ Rahel+ damoa nkyɛn wɔ Selsa a ɛwɔ Benyamin asaase so no, na wɔbɛka akyerɛ wo sɛ, ‘Mfurum a wokɔhwehwɛɛ wɔn no, wɔahu wɔn, na wo papa agyae mfurum no akyi di+ redwen wo ho sɛ: “Dɛn na menyɛ wɔ me ba yi ho?”’ 3 Wufi hɔ a, toa so kodu Tabor dua kɛse no ase, na wudu hɔ a, wubehyia mmarima baasa a wɔrekɔ nokware Nyankopɔn no anim wɔ Betel;+ ɔbaako kura mpɔnkye mma abiɛsa, ɔbaako kura paanoo abiɛsa, ɛnna ɔbaako so ahina kɛse a bobesa wom. 4 Wobebisa sɛnea wo ho te, na wɔama wo paanoo abien; ɛyɛ a gye. 5 Ɛno akyi no, kɔ nokware Nyankopɔn no bepɔw no so, baabi a Filistifo asraafodɔm wɔ no. Sɛ wudu kurow no mu a, wubehyia adiyifo bi a wɔresian afi sorɔnsorɔmmea* hɔ sɛ wɔrehyɛ nkɔm, na wubehu sɛ nkurɔfo di wɔn anim rebɔ asanku, mpintin, ntɛntɛbɛn, ne asankuten. 6 Yehowa honhom bɛba wo so,+ na wo ne wɔn bɛhyɛ nkɔm, na wobɛyɛ w’ade sɛ onipa foforo.+ 7 Sɛ saa nsɛnkyerɛnne yi ba mu a, yɛ nea wubetumi biara, efisɛ nokware Nyankopɔn no di w’akyi. 8 Ɛno akyi no, di kan kɔ Gilgal,+ na mesian aba wo nkyɛn abɛbɔ ɔhyew afɔre ne asomdwoe afɔre wɔ hɔ. Twɛn nnanson kosi sɛ mɛba wo nkyɛn. Afei mɛma woahu nea ɛsɛ sɛ woyɛ.” 9 Bere a Saul dan ne ho sɛ ɔrefi Samuel nkyɛn akɔ ara pɛ, Onyankopɔn sesaa ne koma ma ɔyɛɛ sɛ onipa foforo, na nsɛnkyerɛnne yi nyinaa sisii saa da no. 10 Enti wofii hɔ kɔɔ bepɔw no so, na adiyifo bi behyiaa no; ɛhɔ ara na Onyankopɔn honhom baa no so,+ na ofii ase hyɛɛ nkɔm+ wɔ wɔn mu. 11 Bere a wɔn a wonim no dedaw no hui sɛ ɔne adiyifo no rehyɛ nkɔm no, wobisabisae sɛ: “Dɛn na ayɛ Kis ba yi? Saul nso ka adiyifo no ho anaa?” 12 Ɛnna ɔbarima bi a ofi hɔ bisae sɛ: “Na wɔn papa ne hena?” Ɛno nti, abɛyɛ asɛm a nkurɔfo taa ka sɛ:* “Saul nso ka adiyifo no ho anaa?”+ 13 Bere a ɔhyɛɛ nkɔm wiei no, ɔkɔɔ sorɔnsorɔmmea hɔ. 14 Akyiri yi, Saul papa nua bisaa ɔne ne somfo no sɛ: “Mokɔɔ he?” Ɛnna ɔkae sɛ: “Yɛkɔhwehwɛɛ mfurum no,+ nanso yɛanhu wɔn, enti yɛkɔɔ Samuel nkyɛn.” 15 Saul papa nua no bisae sɛ: “Mesrɛ wo ka kyerɛ me, dɛn na Samuel ka kyerɛɛ mo?” 16 Ɛnna Saul buaa ne papa nua no sɛ: “Ɔka kyerɛɛ yɛn sɛ wɔahu mfurum no.” Nanso ahenni no ho asɛm a Samuel kae no de, Saul anka ankyerɛ no. 17 Samuel frɛfrɛɛ ɔman no behyiae wɔ Yehowa anim wɔ Mispa,+ 18 na ɔka kyerɛɛ Israelfo no sɛ: “Nea Yehowa, Israel Nyankopɔn aka ni, ‘Me na miyii Israel fii Egypt, na migyee mo fii Egyptfo ne ahenni a ɛhyɛɛ mo so no nyinaa nsam.+ 19 Na mo de, mo Nyankopɔn a ogyee mo fii mo haw ne mo amanehunu nyinaa mu no, ɛnnɛ moapo no,+ na moaka sɛ: “Daabi, yɛpɛ sɛ wusi yɛn so hene.” Enti afei mummegyina Yehowa anim mmusuakuw mmusuakuw ne apem apem.’”* 20 Ɛnna Samuel maa Israel mmusuakuw no nyinaa baa ne nkyɛn+ mmaako mmaako, na woyii Benyamin abusuakuw no.+ 21 Afei ɔmaa Benyamin abusuakuw no baa ne nkyɛn mmusua mmusua, na woyii Matrifo abusua no. Na woyii Kis ba Saul.+ Nanso bere a wɔkɔhwehwɛɛ no no, wɔanhu no. 22 Ɛnna wobisaa Yehowa sɛ:+ “Ɔbarima no abedu ha anaa?” Na Yehowa kae sɛ: “Hwɛ, ɔno na wakohintaw nneɛma mu no.” 23 Enti wɔde mmirika kɔfaa no bae. Bere a obegyinaa ɔman no mu no, na ɔware sen obiara.+ 24 Samuel ka kyerɛɛ ɔman no nyinaa sɛ: “Nea Yehowa apaw no no,+ moahu sɛ obiara nte sɛ ɔno wɔ ɔman yi nyinaa mu?” Na ɔman no nyinaa bɔɔ ose kae sɛ: “Ɔhene, nya nkwa daa!” 25 Afei Samuel kaa nea ɔmanfo no bɛyɛ ama wɔn ahemfo,+ na ɔkyerɛwee wɔ nhoma mu de kɔtoo Yehowa anim. Ɛnna Samuel gyaa ɔmanfo no nyinaa kwan ma obiara kɔɔ ne fi. 26 Saul nso kɔɔ ne fi wɔ Gibea, na akatakyi a Yehowa kanyan wɔn* no ne no kɔe. 27 Nanso mmarima ahuhufo bi kae sɛ: “Ɛbɛyɛ dɛn na oyi atumi agye yɛn?”+ Enti wobuu no animtiaa, na wɔamfa akyɛde biara ammrɛ no.+ Nanso wankasa.*
^ Anaa “wɔde ayɛ akasabebu sɛ.”
^ Nt., “kanyan wɔn koma.”
^ Nt., Na ɔyɛɛ sɛ mum.”